Baarlamaanka Puntland oo doonaya in ay horjoogsadaan qorshaha madaxweynaha ee uu ku kordhinayo kuraasta baarlamaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo doonaya in ay horjoogsadaan qorshaha madaxweynaha ee uu ku kordhinayo kuraasta baarlamaanka
May 18, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Axmed Cali Xaashi. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa isku dayaya in ay horjoogsadaan qorshe uu Madaxweynuhu ku doonayo in uu ku kordhiyo kuraasta baarlamaanka, ilo-wareedyo baarlamaanka ku dhow ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay.
Ku dhawaad 45 xildhibaan ayaa saxiixay dukumenti ay uga dalbanayaan Guddoomiyaha Baarlamaanka Axmed Cali Xaashi in uu joojiyo qorshaha madaxweynaha ee uu ku kordhinayo kuraasta baarlamaanka, iyaga oo daliishaday in qorshaha madaxweynaha uu yahay mid sharci daro ah marka loo fiirsho dastuurka dowladda.
Dhawaan, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa waraaq codsi ah u diray Guddoomiyaha Baarlamaanka oo uu uga codsanayo kuraas dheeraad ah in baarlamaanka laga siiyo qabiilooyin kasoo jeeda gobolka Mudug.
Tan iyo markii la asaasay sanadkii 1998-dii, Baarlamaanka Puntland ayaa ka kooban 66 xildhibaan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada warfaafinta dowlada Puntland ayaa haayadaha warbaahinada Puntland ku wargelisay in ay soo gudbiyaan liiska shaqaalahooda, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta. “Waxaa lagu wargelinayaa dhamaan madaxda haayadaha warbaahinta ka [...]